Dowlado badan oo carab ah oo go'aamiyey haddii ay berri soon tahay - Caasimada Online
Home Warar Dowlado badan oo carab ah oo go’aamiyey haddii ay berri soon tahay
Dowlado badan oo carab ah oo go’aamiyey haddii ay berri soon tahay
Sida ay qorayaan Wakaaladaha Wararka ee Dowladaha Carabta waxaa la go’aamiyey in Maalinta Berri ah la dhameystiri doono 30 Shacabkaan, isla markaasna ay maalinta ugu horeyso soonka noqon doonto Khamiista.
Dowladaha Xaqiijiyey arrintaan waxaa ugu horeysay dowladda Qatar oo ku dhawaaqday inay adkaatay aragtida Bisha Ramadaan, waxayna Wasaaradda awqaafta iyo Arrimaha Diinta go’aamisay inaysan berri soon aheyn.
Sidoo kale guddigii ay dowladda Sacuudiga u saartay raadinta Bisha Ramadaan ayaa soo gudbiyey inay arki waayeen Bisha isla markaasna waxay Maxkamadda ugu sareyso sacuudiga ku dhawaaqday in Berri la dhameystiri doono 30-ka Shacabaan.
Wadamada kale ee looga dhawaaqay in berri 30 Shacabaan la dhameystiri doono waxaa kamid ah:
Iyo dowlado kale
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Dowladda Soomaaliya weli ma aysan soo saarin go’aankeeda ku aadan Haddii ay Berri soon tahay iyo haddii kale, sidoo kale ma jiro ilaa hadda gobol ka tirsan Soomaaliya oo laga arkay Bisha.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa inay dowladda Soomaaliya go’aan soo saarto, waxayna u badan tahay inay go’aamiso in Berri la dhameytiri doono 30 Shacbaan.